သံတွဲသားများသို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သံတွဲသားများသို့ 
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Sep 21, 2011 in Creative Writing | 39 comments
မည်သူ့ ကိုမျှ မနစ်နာစေလိုပါ။ကျွန်တော် သံတွဲကိုချစ်သလို အားလုံးချစ်ကြလိမ့်မယ်မမျှော်လင့်ပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရ ရင် မီးမီးသော်ဆိုတဲ့ နာမည်ကနေဘာလို့ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ပြန်ပြောင်းလိုက်ရလဲဆိုတော့ ဖြေရှင်းဖို့ လိုလာပီထင်လို့ ပါ။မီးမီးသော် ရဲ့ ဘဝကိုကျွန်တော်မြတ်နိုးပါတယ်။ဒီကလောင်က ကျွန်တော့်ဆေးကျောင်းသားဘဝတလျှောက် ရေးခဲ့တဲ့ ကလောင်မို့ ပါ။တနေ့ နေ့ စိတ်မကောင်းစရာတွေတွေ့ နေရတော့ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဖြေရှင်းသင့်ပီထင်လို့ ဝင်လာရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို စွပ်စွဲနေကြတာမြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။စွပ်စွဲခံနေရသူတွေအတွက်လဲဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော့် မြို့ လေးကိုချစ်သလို ကျွန်တော့် အပေါ်မှာ မေတ္တာ မထားနိုင်သူတွေကိုလဲ ချစ်လျှက်ပါ။ထာဝရ အချစ်မျက်စိနဲ့ ဘဲကြည့်လျှက်ပါ။
ကျွန်တော် စီးပွားရေးမလုပ်တတ်ပါ။အိမ်မှာ ကလေးတွေကိုစာသင်တဲ့အလုပ်လေးနဲ့ ပျော်မွေ့ နေတာပါ။ဘယ်သူမှ ကျွန်တော်နဲ့ ပြိုင်ဘက်မရှိသလို။ကျွန်တော် မနာလိုစရာလူမရှိပါ။အားလုံးသောမြို့ သူမြို့ သားတွေကောင်းဖို့ ကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။အားလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘဝလေးတွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
တဆက်တည်းပါ သူကြီးအပါအဝင် အားလုံးသောရွာသူ၊ရွာသားများကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော် မိန်းကလေးမဟုတ်ပါ။ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးဘဝကို အင်မတန်ချစ်ပါတယ်။ခုတော့ ကျွန်တော် ချစ်တဲ့MG ရွာကိုရော၊မီးမီးသော်အကောင့်ကိုပါ စွန့် ရတော့မှာပါ။ပြောခဲ့ပြီးတဲ့စကားထပ်ပြောရပါမယ်။ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ ငွေအားလုံးကို သူကြီးကြိုက်ရမှာသုံးပါ။
နောက်ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့မှာ မို့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုလဲ လိမ်ခဲ့မိတဲ့အပြစ်လေးတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။
သံတွဲသား လူယုတ်မာများလဲသိစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်မှာ တခြားအကောင့်မရှိပါ။မီးမီးသော် အကောင့်တခုသာလျှင်ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော် အိမ်အမှတ်(၉)ဦးဥတ္တမလမ်းမှာနေပါတယ်။ကျွန်တော့် handphone ၀၉၄၉၆၅၃၇၁၇ပါ။မည်သူမဆို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာခေါ်ယူ၍ လူကြီးလူကောင်းပီသ စွာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
အထင်နဲ့ ဇွတ်မပြောပါဘဲ လက်တွေ့ ပွင့်လင်းစွာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားတရား၊သံင်္ဃာမိဘ ဆရာသမားများမှလွဲ၍မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မျှမကြောက်ပါ။ကြောက်ရွံ့ စရာလဲ မလိုဟုထင်မှတ်လျှက်။.
ကျွန်တော် MG ကိုနှုတ်ဆက်ရတာစောလွန်းတယ်။ကံမကောင်းလို့ ပေါ့။ဒီအချိန်မှာဆုံးရှုံးမှုတပွေ့ တပိုက်နဲ့ ပေါ့။ဖြေရှင်းသင့်ပီထင်လို့ ပါ။
ဒီလောက်ကြီး မလိုပါဘူးဗျာ။ MG ကို ပြန်မလာတော့လောက်အောင်တော့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ရေးပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းကြရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
အားလုံးကို ကြိုဆိုလျှက်ပါ။ကြီးသူကို ရိုသေ၊ငယ်သူကို သနား၊ရွယ်တူကို လေးစားလျှက်ပါ။ကျွန်တော် မိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
မော်မော်သီးကနေ..ကျား ဘ၀ ပြောင်းသွား ပဟ..
သရုပ်ဆောင် သန်တန်း တက်ဖူးတယ်ထင်တယ်..
ပြီးတော့ ပွင့်လဲ ပွင့်လင်းကြပါတယ်
သံတွဲသားတို့ ..သံတွဲ သမီးတို့ ..အဆင်ပြေပြေ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြဗျ..
မီးမီးသော်ကလောင်တချောင်းဟာ MG အတွက်မရှိမဖြစ်ပါ၊
မီးမီးသော် (ခ) ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ ။ အကိုနဲ့ကျွန်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိကျွမ်းပြီးသားသူတွေပါ ။ မီးမီးသော် ဆိုတာကို အကိုမှန်းကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး ။ မကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက် အတွက်နဲ့ အကို့လို လူတစ်ယောက်ကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုရင် လောကကြီးဘယ်တရားပါတော့မလဲဗျာ ။ ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော မမီးမီးသော် ရဲ့သံတွဲမြို့အတွက်စွမ်းဆောင်ခဲ့တာလေးတွေကို ကျွန်တော်အသိအမှတ်ပြုပါတယ် ။ အကို မန်းဂေဇက်ကိုမစွန့်ခွါပါနဲ့ ။ နာမည်ရင်းနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရဲတဲ့ အကို့သတ္တိကို ကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်အကို ။ မီးမီးသော်ရဲ့ ပိုစ့်တွေကို မန်းဂေဇက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မြင်ချင်ပါသေးတယ် ။
အကို့အတွက်ပန်းညို(သံတွဲ) ရဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ပြချင်ပါတယ် ။ ကဗျာနာမည်က` ပြီးသွားမှာပါ´တဲ့
* ကောင်းကင်ပြာပြာ ၊ မိုးပြာပြာတွင်
စန္ဒာလမင်း ၊ ထွန်းလင်းသာချိန်
မိုးတိမ်လွှာတို့ ၊ ဖုံးလို့လွှမ်းကာ
ဒါလည်းမကြာ ၊ ပြီးသွားမှာပါ
* မှောင်မိုက်သောည ၊ တွေ့ကြုံရလျှင်
ထွန်းပစန္ဒာ ၊ လရောင်ဝါ၏
ပေါ်လာအဆင်း ၊ ဆောင့်ဆိုင်းရင်းဖြင့်
အားတင်းကာသာ ၊ နေရမှာပေါ့
အားသာတင်းထားစမ်းပါဗျာ …………. ။ ။
ကိုယ်မှန်တည်းထင်ရင် ဆက်လုပ်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်.အတွက် အကျိုးရှိရင်ဆက်လုပ်ပါ အောင်မြင်သူတိုင်း လေကြမ်းကတော. အတိုက်ခံရစဲပါ။ ဒီပုံစံနဲ. ဒီရွာက ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော. စိတ်မကောင်းစရာပါဗျာ…
ဟုတ်ပါတယ်…မီးမီးသော် …မကလို့မော်မော်သီးပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီး ပါဘူး…ကလောင် နမည်က လူတိုင်းကြိုက်သလိုပေးခွင့်ရှိတာပဲ…မသွားပါနဲ့နော်…..မိန်းကလေးဘ၀ကိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုတော့ lone တို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ… Lone ကတော့ ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်… ကိုသန်းထဋ်ဦး.. အရင်ဘ၀ကကုသိုလ်
ကောင်းမှုများများလုပ်ခဲ့လို့…ယောက်ျားဘ၀ကို ရတာဂုဏ်ယူစရာပါ… MG ကနေတော့ ထွက်မသွားပါနဲ့…အားလုံးကို ခင်တယ်ဆိုရင်…MG မှာစာဆက်ရေးပါနော်……… လူတိုင်းကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်ပါပဲ… သူများစကားတွေနားမယောင်ပါနဲ့… ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ဆက်လျှောက်ပါနော်…………
အူးတာလေး ဗျင် လိုက်ချင်တာပေါ့နော်
မီးမီးသော် ဘဝ ကို အရမ်းချစ်မြတ်နိုးသူ မောင်သန်းထွဋ် ဦး ဟာ
ဂေဇက်ကို မလာတော့ဘူး ဆိုတော့က…ပေါ့နော်
ယိုးဒယား များ သွားတော့မှာမို့ လားပေါ့နော် ။
မဖြေချင်လဲ ရပါတယ် နော်
မီးမီးသော် တစ်ယောက် ကို
သတိရ နေမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းပေါ့နော်
ဟုတ်ပ။ဂေဇတ်ကဘာကြောင့်ထွက်သွားရတာလဲ။ တယ်ထူးဆန်းပါလား။ အဖြေလေးပေးပါဦး။ ပြီးတော့….?
ရန်ကုန်မှာတုံးက.. စာနယ်ဇင်းလောကမှာလုပ်တုန်းကလည်း.. ကဗျာ၊စာမူတွေ.. ဘုန်းကြီးတွေ..ယောက်ျားတွေက..မိန်းမကလောင်အမည် သုံးကြပြီး.. လာပို့ကြတာတွေ့ရပါတယ်.။
အယ်ဒီတာတယောက်အနေနဲ့ကတော့.. ကိုယ်သိတာတွေရှိလည်း.. အယ်ဒီတာတာဝန်ခံမှုထုံးစံအရ..တခြားသူတွေကို… ပြောခွင့်မှမရှိတာနော..။
ယောက်ျားဖြစ်ပြီး.. မိန်းကလေးဘ၀ကို ကြိုက်တာဆိုရင်တော့.. ဂေးပေါ့..။
ဒီရွာမှာ.. ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့.. ဂေးတွေကိုလည်း ခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိပါ..။
တခြားအကြောင်းထူးမရှိရင်.. သူလိုကိုယ်လိုပဲ.. ဆက်ရေးနိုင်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါပဲ..။
ရွာတခါးက.. ကိုရင့်အတွက်.. အမြဲဖွင့်ထားပါတယ်လို့..နော..။
အမျိုးမျိုးပဲ … ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းမသိတော့ဘူး ..
ကလောင်ရှင်ရဲ့ လိင်က ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ .. ကလောင်နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်တော့ ရေးရတာပေါ့ …ကလောင်နာမည်က ယောကျာ်းကြီးဖြစ်ပြီး ကလောင်ရေးတာ မိန်းမကြီးဆိုလည်း သူများတွေ ငန်းကြောထတဲ့ ပို့စ်မှာ ၀င်ငန်းပေးရတာပဲ … ။ မှတ်မှတ်ရရ … ဟိုတစ်ယောက်လေ … ။ အားကျမခံဝင်ဂလုဦးမှတဲ့ … ။
ဘာတွေများအတွေးချော်နေရတာတုန်း မော်မော်သီး ရေ။ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ပါ။ ပို့စ်တွေဆက်တင်ဖို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။ အော် ဒါနဲ့ နောက်တခါ ကျွန်မက မိန်းကလေးပါ လို့တော့ ပြန်မပြောနဲ့တော့နော်။
ရဲအောင်လံ ကိုကျော်ကျော် ( ထွန်းသန့်ကျော်) ကိုယ်တိုင် သွားပီး လူကိုယ်တိုင် ခြိမ်းချောက်
ဒီတော့ အေးဆေးနေတတ်တဲ့ အဲဒီအကို စိတ်ညစ်သွားတာဖြစ်မှာ ။
အင်း ။ ဟုတ်တယ်ဗျ ။ အဲဒီလိုသတင်းမျိုးတော့ တစ်ခါကြားမိလိုက်တယ် ။ ဖမ်းမယ်ဆီးမယ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေတောင်မှ ရှိဆိုပဲ ။
ကြားရရုံတင် မဟုတ်ဘူး နော် သိကိုသိနေတာ
( ဟို အပျက်တွေ ဘာဝင်ပြောဦးမလဲ မသိဘူး၊ ကြောက်လိုက်တာ )
သံတွဲမြို့နဲ့တကွ မြန်မာတပြည်လုံးအေးချမ်းသာယာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ တစ်လုံးတစ်ခဲ ကြီး ပြည့်ရပါလို၏ ဗျား ၊
အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း ၊
ကို nature လဲ ကောင်းသော အကျိုးခံစားရပါစေ ။
ကိုသန်းထွဋ်ဦး ဘာကြောင့်ဂလိုလုပ်သလဲဆိုတာ နားမလည်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်မို့ “ခွဲသွားပေမဲ့ လမ်းကြုံရင်တော့ ဝင်လာပါအုံးလို့” နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ သဂျီးကတော့ ပျော်နေလေရဲ့၊ သူအတော်သက်သာ သွားမှးကိုး။ ခင်ဗျားလမ်းစဉ်လိုက်ဖို့တောင် ရွာသားတချို့ကို အီးမေးလ်ပို့ထားလေရဲ့။
ဖြေရှင်းတာတော့ ဖြေရှင်းတာပေါ့လေ … ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ ပေါ်လာတာလေးနည်းနည်းတွေ့လို့ ထပ်စလိုက်ဦးမယ်
1.မော်မော်သီးက ဂျော်လဂီပုတို့ အဖွဲ့ဝင်လားဟင် … (((မီးမီးသော် ရဲ့ ဘဝကိုကျွန်တော်မြတ်နိုးပါတယ် ))) လို့ ဆိုထားလို့ပါ …
2.အိမ်နံပါတ်နဲ့ လိပ်စာသာ ရေးတယ် ရပ်ကွက်ကျတော့ မပါဘူးနော် … မျက်လှည့်ပြထားတာလား
3. ဖုန်းနံပါတ်ပါ တင်သဖြင့် …. ဆေးကျောင်းသားလေးကို ရင်ခုန်ချင်တဲ့ အပျိုချောတွေ ဖုန်းဆက်ကြမှာ မြင်ယောင်သေး … (ဂေဇက်ထဲ လူပေါင်း လေးထောင်ကျော် ၀င်ဝင်ဖတ်နေတာဆိုတော့ )
4. တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် မျက်နှာဖုံးခွာလိုက်ရတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး … ။ မှန်တယ်ထင်တာ လုပ်ခွင့် လူတိုင်းမှာ ရှိပါတယ် .. ဒါလွတ်လပ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးပါ … ။ under pressure နဲ့ စာရေးနေရတယ်ဆိုလျှင်တော့ .. မပြောတတ်တော့ဘူးလေ …
မှန်တာပြောရင် ရွာပြင်ထုတ်ခံရသလို များ ဖြစ်နေသလား..
အားလုံးသော ရွာသားများအပေါ်ချမ်းသာခြင်းသုခနဲ့ ပြည့်စုံပါစေကြောင့်တောင်းဆုပြုပါရစေ။ကိုခိုင်တို့ မမအိတုံ တို့ ရေ….ကျွန်တော်ဟာ ဂေးတစ်ယောက်မဟုတ်. ပေမယ့်. လူသားအပေါ်မှာ ချစ်တတ်တဲ့ မျက်စိ နဲ့ ချစ်တတ်သူပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘဝတက္ကသိုလ် မှာဆူကြုံ၊နိမ့်မြင့်ကြုံရစ မြဲ
မို့ တခါတလေ မှာ စိတ်အရမ်းညစ်လို့ ခဏရှောင်ဖယ်ယုံသက်သက်ပါ။ကျွန်တော် လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ၊တသီးပုဂ္ဂလကိစ္စဘယ်တုန်းကမှမတိုက်ခိုက်ခဲ့သလို၊ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်လာ
လို့ သာ ပြန်တုန့် ပြန်ခဲ့ရတာချည်းပါ။လူသားအကျိုးပြုစာပေများသာ ရေးသား
မမအိတုံရေ….ကျွန်တော့် အိမ်လိပ်စာက အိမ်အမှတ်(၉)၊ဦးဥတ္တမလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ပါ။ရွာသားများ လာလည်ဖြစ်ခဲ့ရင် တတ်အားသ
ရွေ့ ကူညီသွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ သံတွဲမြို့ ကကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ။ကျွန်တော် နာမည်ကို မသိသူမရှိပါဘူး။ကျွန်တော့်ပေါ်မှာ မေတ္တာမထားနိုင်တဲ့ သံတွဲသားတစ်ချို့ ကို မသိသိအောင် ရေးပြရခြင်းပါနော်။အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ။MG ရွာကြီး ဖွံ့ ဖြိုးစည်ပင်ပါစေ။
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေတယ် ဗျာ ။ အားကောင်းတဲ့ ကလောင်ရှင် တစ်ယောက် တော့ဆုံးရှုံး လိုက်ရပါပြီ၊
သတင်းတော့ကြားမိသား ၊ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး ထင်ထားခဲ့မိတာ၊
အစက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိခဲ့ကြရတာလဲ ပါ ပါတယ်၊ ခုတော့နောက်ကျရပြီ။
ပြန်လာခဲ့ပါ ညီလေးရာ ၊
ရွှေဘ ပထမတော့ နဲနဲနာမှာပေါ့ ၊
ဇတ်သိမ်းခါနီး အထိ ဘာဖြစ်လို့ မစောင့်နိုင်ရတာလဲ ၊
အားလုံးသောရွာသားများအပြင်၊သံတွဲကအကို ညီရင်းမောင်နှမ အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အကူအညီလိုခဲ့ရင် အချိန်မရွေးဖုန်းဆက်၍ခေါ်ပါ။
အိမ်ကို လာလည်ကြဖို့ ဖိတ်ပါတယ်။
မနေသင့်မနေထိုက်တဲ့အရပ်ကို သတ်မှတ်တဲ့အထဲမှာ ကိုယ့်ကိုချီးမြောက်မယ့်သူတွေ မရှိတဲ့အရပ်ကိုညွှန်းထားတဲ့အတွက် ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောယူရရင်… ကိုယ့်ကို ချီးမြောက်မယ့်၊ ၀ိုင်းဝန်းဖေးမမယ့် လူတွေ ရှိတဲ့အရပ်ကို ခွဲခွာသွားမယ်ဆိုတာတော့ သဘာဝမကျဘူးထင်ပါတယ်… ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် အပြီးတော့ထွက်မသွားသင့်ပါဘူး… အခက်အခဲတွေရှိကောင်းရှိပါမယ်… အဲဒီအခက်အခဲတွေကပဲ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေကို ပိုလှအောင်.. ပိုအဓိပါယ်ရှိအောင်လုပ်ပေးနေတာမလား… ဘာမှန်းမသိပေမဲ့ ရင်ဆိုင်စရာရှိတာရင်ဆိုင်လိုက်ပါ့လို့ … နွေးထွေးတဲ့ နေရာတစ်ခုကနေ ရှောင်ထွက်မသွားသင့်ဘူးလို့ .. အကြံပြုပါရစေ…။
ကျမက သံတွဲသူတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့ မျက်မှန်းတန်းမိမှာပါ။
ကိုသန်းထွဋ်ဦး နဲ့ဆိုရင်တော့ အသက်နည်းနည်း ကြီးမယ်။
ပေစုတ်စုတ် ပြောတာ အရမ်းမှန်တယ်။
စိတ်အား ပျော့တယ် ထင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဟဲဟဲ နောက်ပဲန်နိမ်းတခုထပ်သုံး၊ရတာပဲနော့။
ကျွန်တော်က လူသစ်ဆိုတော့ ဘာမှန်းတော့မသိဘူး ၊ ဘာတွေရေးလဲ သိပ်မသိဘူး ၊
ဒါပေမဲ့ ။။ မီးမီးသော် ရဲ့ comment လေးတွေ ဒီစာလေးကတော့အကျိူးများလှပါတယ် ၊ ဒီစာလေးကိုတော့မှတ်သားထားပါမယ် ကူးထားပါရစေ ၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စ သဖြင့်တွေ့တွေ့ နေ ပြီး သတိထားမိနေပါတယ်။
ကိုယ့်နာမည် ဖုန်း နံပါတ်တွေတောင် ထုတ်ဖေါ်ပြီးမှ ဒီကထွက်မယ်ဆိုတာ အရူံးပေးရာ မကျဘူးလား?????
“ဘုရားတရား၊သံင်္ဃာမိဘ ဆရာသမားများမှလွဲ၍မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို မျှမကြောက်ပါ။ကြောက်ရွံ့ စရာလဲ မလိုဟုထင်မှတ်လျှက်။. ”
ဒီလိုပြောပြီးမှ … မီးမီးသော် နံမည်နဲ့သာ ဆက်လိုက်စမ်းပါ။
ဆရာ မော်မော်သီးရေ အားလုံးက စောင့်နေကြတယ်တဲ့
ခင်ဗျားလို တစ်ယောက် ကျန်သေးတယ်ဗျ
B လိုလို G လိုလို သိပ်လုပ်တာ..
လာလည်မယ် လာလည်အုံးမယ်ဗျို. ဆေးကျောင်းကအထုတ်ခံရတဲ.ကိုသန်းထွဋ် ဦး ဆိုရင်သိတယ်မဟုတ်လား(စတာနော် ဟီးး) မခွဲသွားပါနဲ.ဗျာ မန်းဂဇက်က ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဗျ ဘယ်လိုအကြောင်းပဲရှိရှိပေါ.ဗျာ လူဆိုတာ ကိုယ်ကောင်းရင်ခေါင်းမရွေ.ပါဘူး ဆက်သာလုပ်ဗျို.
ဘာတဲ.ရွှေဝါရောင် ကြောင်.ကျောင်းထုတ်ခံရတာဟုတ်လား တကယ်ကိုလေးစားပါတယ်ဗျာ ကျနော်တို.တွေမလုပ်နိုင်ခဲ.ဘူးဗျ တကယ်ကြီးကိုပဲလေးစားထိုက်တဲ.သူတစ်ယောက်ပါလို.မှတ်ချက်ပေးရင်း အစ်ကို.ရဲ.ပို.စ်တွေကို ထပ်မြင်ချင်သေးတယ်လို.ဆန္ဒ ပြုလိုက်ပါတယ်
အားလုံး မမြင်ချင်အဆုံးပါ ။
အများအတွက်ရည်ရွယ်ပီး ပို့စ်လေးတင်လိုက်တာနဲ့ အာဏာပိုင်ရဲ့ေ..ွး တွေက ဝင်ကိုက်ကိုက်နေ
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်အားကျလေးစားရတဲ့ဆရာသမားတွေ အများကြီးရှိတဲ့ MG ရွာကိုခွဲမသွားနိုင်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါမယ်။နည်းနည်းတော့
နားလိုက်ပါမယ်ဗျာ။သန်းထွဋ်ဦး နာမည်နဲ့ ဘဲဆက်ရေးသွားတော့မှာပါ။အားလုံးက အားပေးကြတော့ ကျေးဇူးပါနော့။
ဘာကိုမှ နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိတော့လို့ပါ
” I am the master of my soul”
“I am the captain of my life”
ကိုယ့်ဘ၀ ကို ဘယ်လို ထိုးနှက်မှုတွေ ဘယ်သူတွေကြောင့်မှ လက်မလျှော့နဲ့။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ပဲပိုင်တယ်။
ပြန်လာခဲ့ပါ။ ရွာတံခါးက အမြဲဖွင့်ထားသလို တို့ရွာသားများကလည်း အမြဲ ကြိုနေပါတယ်။